စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး ရုရှားနိုင်ငံနှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ ဆွေးနွေးမည်
မော်စကို၊ ဇွန် ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ရုရှားနှင့် တောင်ကိုရီးယား တာဝန်ရှိသူများက စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရေး ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Igor Morgulov က ဇွန်လ ၁၉ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉.၆.၂၀၁၈. တတိယပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
ရုရှား ၃ - ၁ အီဂျစ်
(၄၇',၅၉',၆၂') (၇၃' ပယ်နယ်တီ)
ပြိုင်ပွဲမှာ FIFA ranking အရအနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အိမ်ရှင်ရုရှား အသင်း ကတော့နှစ်ပွဲကစားနှစ်ပွဲနိုင်နဲ့ ၁၆ သင်းရှုံးထွက် နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အီဂျစ်ကတော့ နှစ်ပွဲကစားနှစ်ပွဲရှုံး နဲ့ အုပ်စုအဆင့်မှပဲ
၁၉.၆.၂၀၁၈. ဒုတိယပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ပိုလန် ၁ - ၂ ဆီနီဂေါလ်
(၈၅') (၃၇', ၆၀')
၁၉.၆.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်​
ဂျပန်​ ၂- ၁ ​ ကိုလံဘီယာ
(၆' ပယ်​နယ်​တီ,၇၃') (၃၉')
သြစတြေးလျနိုင်ငံ တိရစ္ဆာန်ရုံရှိ ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး လူဝံကြီး သေဆုံး
ဆစ်ဒနီ၊ ဇွန် ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သြစတြေးလျနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း Perth တိရစ္ဆာန်ရုံရှိ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး လူဝံကြီး Puan သည် ဇွန်လ ၁၈ ရက်က သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁၈.၆.၂၀၁၈. ဒုတိယပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ဘယ်လ်ဂျီယံ ၃ - ၀ ပနားမား
၁၈.၆.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ဆွီဒင် ၁-၀ တောင်ကိုရီးယား
လန်ဒန်တွင် ရထားတိုက်မိမှုကြောင့် လူ ၃ဦးသေဆုံး
လန်ဒန်၊ ဇွန် ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်ပို့ဆောင်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ (BTP) က လန်ဒန်မြို့တောင်ပိုင်း Loughborough Junction ဘူတာရုံတွင် ရထားတစ်စင်းဖြင့် တိုက်မိ၍ လူ ၃ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း ဇွန် ၁၈ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၈.၆.၂၀၁၈. တတိယပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
တူနီးရှား ၁ -၂ အင်္ဂလန် ( ၃၅') (၁၁',၉၁')